Quudinta qalbi jabay: Cunto maxay u tari kartaa qof murugeysan? - BBC News Somali
Quudinta qalbi jabay: Cunto maxay u tari kartaa qof murugeysan?
22 Disembar 2019
Xigashada Sawirka, Katie Horwich
Cuntada ma caawin kartaa qof murugeysan oo laga dhintay ama dhibaato kale ay soo gaartay?
In la is nafaqeeyo waa muhiim marka la murugeysan yahay oo walwal uu jiro - balse in aad wax cuni waydo marka aad murugeysan tahay waa wax iska cadi ah.
Lindsay Ostrom oo ku nool Minnesota ayaa arrintaas la kulantay. Iyadoo leh uur shan bilood ah ayey dhashay wiil, maalintii xigtayna wuu ka dhintay.
Murugadii ay dareentay waxay u geysatay saameyn jir iyo maskaxba ah. Habeen iyo maalinba way oyneysay, wayna iska jiiftay, mana aysan dooneyn in ay wax cunto.
Laakiin Lindsay waxay xirfaddeeda ahayd cuntada - waxay leedahay bog ay uga hadasho cuntada oo lagu magacaabo A Pinch of Yum.
Waxay boggeedaas ku sharaxday sida uu dhadhamada cuntada uga tagay, caloosheedana ay u diiday wax kasta, waxaas oo dhanna waxaa ku sababay murugada.
"Xitaa ka hadalka cuntada ayaa i dhibayay. Wax aalaaba ahaa wixii aan jeclaa, ayaan gebi ahaanba diiday," ayey tiri.
"Waxaan markasta ahaa qof jecel cunidda raashiinka basbaaska leh, balse xilligii murugada waxaa cuni karay bataati la shiiday oo keli ah - cunto qalalan oo aan dhadhan lahayn oo keli ah ayaan rabay."
Qaar ka mid ah saaxiibbadeed iyo qaraabadeeda ayaa u keeni jiray cuntooyiinkaas iyo rooti oo keli ah.
Xigashada Sawirka, A Pinch of Yum
Quudinta qalbi jabay: Baradho la shiiday oo maraq laga dhigay
"Waxay inoo noqotay halbowlaha nolosheena," ayey tiri. "Waxaan dhihi jiray 'mar kasta hal digsi oo buuxa inoo kariya'. Taas ayaan u adeegsanayay sida in nolosheyda ay dib u soo noqoneyso. Waad nooshahay waxaadna dooneysaa in aad sii noolaato".
Ostrom waxay ogaatay in ay muhiim yihiin cuntooyiinkaas fudud, ayna jaceyl ku gelinayaan. Waxay qoyskeeda iyo asxaabteeda waydiisatay in ay cuntooyiinkaas ay u keenaan, waxayna boggeeda ku qortay warbixin ay u bixisay Quudinta Qalbi Jabay!
Ka dib waxaa baahay hal ku dhigga ah #feedingabrokenheart, oo dad badan oo isticmaala barta Instagram ay isla wadaageen. Dadka qaar waxay soo dhigeen cuntada ay cunayeen xilligii ay murugeysnaayeen iyo sida ay u caawisay.
Xigashada Sawirka, Instagram
Sawirrada ay soo baahiyeen dadkii adeegsanayay hal ku dhigga ah #feedingabrokenheart
Heerarka hore ee murugada, maskaxda waxyaabo badan ayaa ka guuxaya kuwaas oo sababa in qofka uu waxba cuni waayo, ayey tiri Lisa Shulman, oo ku taqasustay cudurada maskaxda, kana howlgashada Jaamacadda Maryland, ee Mareykanka.
Shaqada Isbitaalka Prof Shulman, waxay tahay in ay og tahay arrimaha ah in aad waydo qof aad jeceshahay - Markii uu seygeeda dhintay waxay qortay buug lagu magacaabo Before and After Loss, kaas oo la xiriira murugada iyo maskaxda.
Waxay ogaatay saameynta murugada iyo sida ay cuntada u caawin karto qofkaas.
Marka aad murugeysannahay, maskaxda waa sida qof ilaaliye ah, ayey sheegtay Prof Shulman. Waxayna intaa ku dartay "waa in aad iska xirto xusuusta xanuunka leh, waana in aad aqbasho oo keli ah dareenka aad xamili karto".
Daraasad: Dadka dunida ku nool "waxaa hareeyay walwal, murugo iyo xanaaq"
"Marka aan murugeysannahay, waa sida in masaafo ay inoo dhexeyso inaga iyo bay'ada kale, taasna waxay xannibeysaa waxa rasmiga ah ee aan dareemeyno," ayey tiri.
"Waxay ila tahay in taas ay koobeyso dhibaatada ah in lagu farxo dhadhanka iyo carafta cuntada."
Basal cayriin ah waa dhadhanka ugu fiican ee aad ku xusuusan karto qof aad jecleyd
Si aad u soo kabsato, waxaad u baahan tahay in xusuusta fiican aad dib u soo celiso, cuntadana door fiican ayey arrintaas ka ciyaari kartaa ayey ku talisay Prof Shulman.
"Si aad horumar caafimaad leh u sameyso, waxaad isticmaali kartaa cuntada oo ku caawin karta," ayey sheegtay: "Aniga waxaan xoogga saari lahaa cunto micno ii leh oo xusuusteyda wanaajin karta. In aan nafsadeyda la hadlo, dib u xusuusto raashiinkii uu seygeyga isiin jiray - wax aan ku naaloodo ayey ii ahayd."
5 Abriil 2019
56 Daqiiqadood ka hor